Pero: Ireo Bilaogy Nalaza Indrindra tamin’ny 2006 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2018 9:59 GMT
Ho fanamarihana ny faran'ny taona 2006, nandray ny andraikitra hampiseho ireo mety ho misongadina indrindra amin'ny Weblogs Peroviana tamin'ity taona ity ireo bilaogera vitsivitsy. Taona iray nahitàna fitomboana saika tsy miovaova teo amin'ny tontolon'ny bilaogim-pirenentsika, izay nandraisan'ny “Cholosfera” anjara, vahoaka avy aminà tontolo samihafa izay tsy nanaiky niditra vao tsy ela akory izay (nihevitra izy ireo fa natao ho an'ny adala mpitoka-monina irery ny fanoratana bilaogy). (Iza no namaky bilaogy tamin'ny 2004, na talohan'izany, rehefa natomboka ny BlogsPerú [ES]?)
Tanatin'ny El útero de Marita, natao avy amin'ireo safidin'ny mpamaky niainga taminà tolokevitra efa napetaka mialoha ny fifantenana, kanefa afaka misafidy ireo bilaogy tsy voatonona ihany koa ianao. Ireto ny sasany amin'ireo be mpifidy indrindra: Queloide [ES], La Nuez [ES], Moleskin Literario [ES], Virtù e Fortuna [ES], sy ireo maro hafa. Afaka mijery ny lisitra feno anatin'ity lahatsoratra ity [ES] ianao.
Naka aingam-panahy tamin'ity fantina ity i El Blog del Morsa ary namorona ny azy manokana ahitàna fahasamihafàna maro, ohatra: Mucho Gusto [ES], E Radio [ES], La Cebolla [ES], sy ireo maro hafa. Afaka manao fampitahàna ianao amin'ny alàlan'ny famakiana ny lahatsoratra feno [ES].
Namoaka ny fantiny manokana miankina amin'ny lohahevitra mahaliana ny Gran Combo Club, nampirisihan'ny El útero de Marita ihany koa. Ohatra, ny Teny: La Peña linguística [ES], ny Literatiora: Puente Aéreo [ES] ary ireo hafa azonao jerena eto.
Mahaliana ny mijery ny fandinihan'ny El útero de Marita fa tokony rafetin'ireo bilaogy hafa, vaovao no sady tsy mitovy amin'ny hafa, ireo fantina bilaogy tsara indrindra amin'ity taona 2007 ity. Raha mamaky ohatra, isika, ny lisitr'ireo bilaogy tsara indrindra tamin'ny 2004 araka ny fifidianana tao amin'ny BlogsPerú, hitantsika fa tsy misy na bilaogy iray aza nitovy tamin'ireo tamin'ny 2006. Ary maro amin'ireo bilaogy ireo aza no efa tsy mandeha intsony. Manantena izahay fa ity 2007 ity no taona hahafahan'ilay Peroviana andavanandro maneho ny heviny, mampandre ny feony, ary ambonin'izay rehetra izay, hotopazana maso, na amin'ity endrika ity na amin'ny endrika hafa ao anaty aterineto.
Nadikan'i David Sasaki avy amin'ny teny Espaniola.